Guddiga Hawlaha Guud - Caawinta Farsamada
Bogga ugu weyn|Kaabayaasha Dhismaha|Guddiga Hawlaha Guud - Caawinta Farsamada
Kooxda IACC Tech Tech Team, 2018
Bulshadaadu ma leedahay mashruuc horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha oo u baahan inuu dhaco, laakiin ma hubtid sida loo sii wado? Kulamada kooxda tiknoolajiyada waa kheyraad kugu jiheyn kara jihada saxda ah. Shirka kooxda tiknoolajiyada waa kulan ka dhexeeya wakiilada bulshada iyo shaqaalaha barnaamijka. Hadafku waa iskaashi iyo xallinta dhibaatooyinka kaabayaasha dhaqaalaha. Waxay kuxirantahay baahida bulshadaada hada, fursado kaladuwan ayaa la heli doonaa. Kooxaha Tech waxay ka caawiyaan:
• Fahamka iyo kala-mudnaanta baahiyahaaga guud ee kaabayaasha dhaqaalaha.
• Horumarinta mashaariic kaabayaal gaar ah.
• Horumarinta istiraatiijiyad maalgelinta mashaariicda gaarka ah ee kaabayaasha.
Si aad u buuxiso codsiga khadka tooska ah ee kooxda teknolojiyada, fadlan booqo Bogga caawinta farsamada ee IACC.
Xaashida xaqiiqda kooxda tikniyoolajiyadda PWB
Kaqaybgalayaasha Tababbarka Gobollada ee PWB goobaha shaqada. Guji si aad u weyneyso.
Tababarrada Webinars ee 2020
Iyadoo COVID-19 ay mamnuucayso shirarka dadweynaha, Guddiga Hawlaha Guud wuxuu ku qasbay inuu kansalo xafladaha shaqsi ahaaneed ee tababbaran ee sanadkan. Taa baddalkeeda, Guddiga iyo hay'adaha la shaqeeya waxay bixiyeen taxane saddex websaydh tababar ah. Haddii aadan awoodin inaad ka soo qaybgasho, ama aad rabto inaad dib u eegto bandhigyada, fadhiyada la duubay ayaa laga heli karaa hoosta.
Tababbarka Gobollada ee 2019 - Dib u soo koob
Guddiga Hawlaha Guud wuxuu soo bandhigay afar munaasabadood oo tababar oo bilaash ah guud ahaan gobolka bilaha Abriil iyo Maajo. Ka qaybgalayaashu waxay barteen sida maaraynta hantida iyo qiimeynta qorshayntu u wada shaqeeyaan si loo abuuro mashaariic ku habboon bulshadooda. Soo-bandhigayaasha maxalliga ah sidoo kale waxay bixiyeen dulmarro ku saabsan barnaamijyadooda maaraynta hantida iyo dalabkooda ku aaddan dalabkooda qiimeynta.
Munaasabadaha tababarka waxaa lagu qabtay Silverdale, Pasco, Longview, iyo Okanogan. Inta udhaxeysa afarta dhacdo ee tababarka:
• 95 xubnood oo matalaya bulshada ayaa kaqeybgalay.
• 24 ka mid ah 39-ka degmo ee Washington ayaa wakiil laga ahaa.
• 46 kaqeybgalayaashu waxay heleen CEUs loogu talagalay biyaha ama biyaha wasakhda ah.
• 41 shaqaale magaalada ah ayaa ka soo qayb galay.
• 20 shaqaale dawladeed ama kuwa gaarka loo leeyahay ah / wasakhda degmada.
• 10 ka mid ah shaqaalaha degmada ee ka shaqeeya adeegga bulshada ayaa ka soo qaybgalay.
• 8 shaqaale degmo ayaa kaqeyb qaatay.
Guddiga Hawlaha Guud wuxuu jecel yahay inuu u mahadceliyo dhammaan inta ku hawlan sidii ay u guuleysan lahaayeen munaasabadahaan tababarka ah, gaar ahaan kuwa waqtiga ka qaatay shaqooyinkooda caadiga ah inay ka soo qayb galaan. Waxaan sidoo kale jeclaan lahayn inaan u mahadcelino shaqaalaha ka socda hay'adaha aan iskaashiga la wadaagno ee Waaxda Caafimaadka iyo Waaxda Ecology.
Ka shaqeynta nasashada Tababarka Gobolka ee PWB - Silverdale, 2019.
Ku soo biir Liiska Emailka PWB
Maamulka iyo Maamulka
Ururka Hawlaha Guud ee Mareykanka - Cutubka Washington (APWA)
Ururka Magaalooyinka Washington, Dhacdooyinka & Waxbarashada (AWC)
Xarunta Adeegyada Cilmi-baarista ee Degmada (MRSC)
Xafiiska Hantidhawraha Gobolka Washington (SAO)
Tababbarka Hay'adda Caawinta Bulshada Reer Miyiga ah (RCAC)
Ururka Saraakiisha Maaliyadda ee Washington, Tababar (WFOA)
Ururka Gobollada Washington (WSAC)
Waaxda Qadiimiga ah ee Gobolka Washington iyo Ilaalinta Taariikhda (DAHP)
Xafiiska Gobolka Washington ee Xeer Ilaaliyaha Guud (ATG)
Wadooyinka iyo Buundooyinka
Guddiga Maamulka Wadooyinka Degmada (CRAB)
Gudiga Horumarinta Gaadiidka (TIB)
Waaxda Gaadiidka ee Gobolka Washington (WSDOT)
Qashinka adag iyo Dib u warshadeynta
US EPA - Maareynta Maareynta Maaddooyinka La Heli Karo
Xarunta Washington Stormwater (WSC)
Biyaha iyo Biyaha Qashinka
Ururka Biyaha ee Mareykanka (AWWA)
Ururka Biyaha ee Mareykanka (AWWA-PNW)
Waaxda Ecology ee Gobolka Washington (ECY)
WA Waaxda Caafimaadka (DOH)
Adeegyada Shahaadada Washington - Hawl wadeennada Biyaha
Xarunta Tababbarka Deegaanka ee Washington (WETRC)
US EPA Biyaha Cabitaanka
Barnaamijyada Tababarka La Xiriira IACC ee Hawlaha Guud
US EPA - Awood Cagaaran
US EPA – Kobaca Caqliga
US EPA - Tayada Hawada Gudaha ee Dugsiyada
US FEMA - Machadka Maareynta Degdegga ah
Kaatalogga Caawinta Farsamada
Ururka Hawlaha Guud ee Mareykanka - Cutubka Washington, Dhammaan Liiska Dhacdooyinka
Kalandarka Shirka ee Ururka Magaalooyinka Washington (AWC)
Biyaha Miyiga ee Evergreen ee Washington
Golaha Isuduwaha Kaalmada Kaabayaasha (IACC)
WA Ururka Degmooyinka Bullaacadaha & Biyaha, Jadwalka Tababarka / Shirarka (WASWD)
WA State Association of County, Kalandarka Shirka (WSAC)
WA Taariikhda Dhacdooyinka Ururka Xiriirka Dakadaha Dadweynaha (WPPA)
Waaxda Ganacsiga, Adeegyada Maareynta Kobaca
Waaxda Ecology, Qalabka Internetka iyo Databases
Waaxda. Caawinta Nidaamka Biyaha ee Cabitaanka Caafimaadka
Waaxda Gargaarka Barnaamijyada Deegaanka
Golaha Isuduwaha Kaalmada Kaabayaasha (IACC) - Kooxaha Tech
Biyaha Tuulooyinka Evergreen ee Washington (ERWOW)
Hay'adda Caawinta Bulshada Reer Miyiga (RCAC)
USDA Horumarinta Reer Miyiga, Caawinta Farsamada (USDA RD)
Wakaaladda Ilaalinta Deegaanka ee Mareykanka (EPA), Nadaafadda Maaliyadda ee Biyaha